Imigca yokuhambisa ngokukhawuleza
Iinkonzo zeMveliso yokuFota
Ukufezekiswa kwe China
Ukuthenga Uluhlu lweDropshipping
Ukulahla ukuPhawula kunye neelebheli zaBucala
Uvavanyo lokudweliswa koluhlu
"Liza kukhawuleza njani ixesha labo lokuKhokela?" yenye yeenkxalabo anazo wonke umnini-shishini lokuDropha xa ekhetha iAgente Dropshipping okanye iDropshipping Suppliers.
Iinkampani eziphezulu zokuwisa kunye neearhente ezinje ngeFulfillPanda, zisebenze nzima ukoyisa lo mbandela ukuze zibonelele ngenkonzo enkulu kubathengi kunye nolwaneliseko.
Sisebenzisane nomnye wabakhokeli bamashishini abucala base China, inkokeli yentengiso kulayini osingise ngqo-kwishishini lehlabathi.
Umgca wabucala ngumjelo ophuhliswe nguwe. Yinkonzo eyahlukileyo ebonelela ngokuhambisa ngokukhawuleza okukhulu, konga ixesha, kwaye iza ngexabiso elifanelekileyo. Ukuhanjiswa kuyakhawuleza kwaye kukhuselekile kunayo nayiphi na enye inkonzo yokuhambisa yamaTshayina.
Ixesha lokuhambisa liqala kwi-7 ukuya kwiintsuku ezili-15.
● Izinto ezibuthathaka, ezinje ngezithambiso ezingamanzi kunye ne powders, azinakho ukuthunyelwa ngabucala. Azivumelekanga ukuba ziphathwe, kwaye ukuba zichongiwe, ziya kutshatyalaliswa okanye zibuyiswe.
UKUTHUNYELWA KOKUHAMBA KWEZINTO ZOKULINGANISELA I-GRAM ZE-50
● Zimbini iindlela zokuhamba ezikhoyo kuthi. Indlela yokuqala iya kubonelela ngolwazi oluchanekileyo kwangexesha (malunga neentsuku ezi-5-15).
● Ukhetho lwesibini kukuhamba ngendlela yezoqoqosho, engabizi kakhulu kodwa ethatha iintsuku ezingama-20 ukuya kwezi-35. Asinakuqinisekisa ukuba siza kubonelela ngolwazi lokuhambisa okanye ezo zinto ziya kufika kwishedyuli.
Ukugcwalisa iPanda kunikezela ngeyona ndlela yokuhambisa ethembekileyo nesebenzayo kunye nokukhetha ukukunceda ukhulise ishishini lakho kwi-2021.
Nceda unxibelelane nathi ngolwazi olongezelelekileyo kwaye ubone ukuba singakunceda njani kwishishini lakho.
Nceda undongeze ngeSkype:
YenziweInParadiseCn ISICATSHULWA SIMAHLA NGOKU!
Akukho 158 Kaiyuan Road, Jiangbei, Ningbo, ZheJiang, China 315033